Home Wararka RW Rooble Maka Badabaadin Karaa Somaliya Qax, Barakac iyo Dhimasho kale Bishaan...
RW Rooble Maka Badabaadin Karaa Somaliya Qax, Barakac iyo Dhimasho kale Bishaan Barakeysan?
Badbaadada waxaa iska leh Ilahey , laakiin RW Rooble waxaa uu doorkaan u muuqdaa qofka kaliya ee xelligaan lagu kalsoonaan karo inuu wax ka qaban karo xaaladda murugsan ee dalka. Dhammaan baraha Bulshada iyo Goobaha lagu shaaho waxaa la isla dhexmarayaa inuu yahay qofka isku soo dhaweyn kara labada dhinac ee isjiitank a uu ka dhaxeeyo kuwaas oo kala ah Madaxtooyada iyo Dowlad Goboleedyada oo ay mucaaridka la socdaan.
RW Rooble waa nin degan oo aan dhib badneyn sida dadka yaqanna ay ku sheegeen waxaana la aaminsan yahay inuu yahay qof aad u raba inuu dalka ka baxo xaaladdaan. Kama dhawaaqo idaacadaha iyo baraha bulshada toona waxaanu hadalkiisa ku soo koobaa wanaag ha la sameeyo si dalka loo badbaadiyo.
Waxaa uu maalmo dhoweyd qaaday tallaabooyin uu meel iskugu keenay Mucaaridka iyo Dowlad goboleedyada oo hal koox uu ka dhigay waana arrin diblomasi ahaan aad u wanaagsan.
Dhinaca kale waxaa uu ka mid yahay kooxda uu M. Farmajo aad ugu dhow yahay oo la hubo inuu ka dhaadhicin karo inaan dalka khater intaan ka badan loo horseedin.Waxaa dalka dhex daadsan ciidamao hubeysan oo habqan u muuqda oo uu ka lumay hogaankii ciidan, kadib markii ay qaar badan ay gadoodeen.
MOL ma aaminsana wararka qar iska tuurka ah ee sheegaya in M.Farmajo uu Sabtida ama xelli ku dhow uu qorsheynayo inuu xilka ka wareejiyo RW rooble, waayo taasi waxay u keeneysaa Farmajo dhibaatadii ugu weyneyd ee uu ku dhaco sababtoo ah:
RW Rooble waxay ka dhigeysaa inay ku riixdo si uu dalka u badbaadiyo inuu si cad uga hor yimaada go’aanka Farmajo oo aan innaba sax ahayn, inkasta oo kooxda Farmajo aysan marana qaadan go’aamo looga fekero dhibaatada ay dalka ula imanayaan ayaa haddana waxaa muhiim ah in markaan aad uga fiirsadaan tallaabada noocan oo kale ah.
Dowlada Goboleedyada iyo Mucaaridka iyo RW Rooble oo dhinac ka soo wada jeestaa waa dhammaadka nolosha siyaasadeed ee Farmajo, marka waa in uusan mideyn.
Beesha caalamka waxay awood u yeelanayaan inay Farmajo ka qaadaan tallaabo cad, maadaama uu diiday in doorasho la’aado, lana saftaan RW Rooble.
Shacbiga Soomaliyeed oo uu ku riixo inay naftooda difaacdaan una wareegaan inay taageeraan RW Rooble, waayoo kii lahaa hooyinka Xabadaha ha laga joojiyo iyo iyadoo Farmajo oo amarayey in lagu ridao sidii inay waxba uga galin oo cadow yihiin.
Maxada Dowlad Gboleedyada ee taageeray in lagu noqodo doorashada Dedban ee lagu heshiiyen in la dhaqan geliyo 17kii September 2021, waa inay soo saran qoraal wadajir ah oo ay ku muujinayaan inay rabaan inuu RW Rooble doorashada looga dambeeyo, taas oo ay si fudud u taageeri doonta Beesha Caalamka iyo Dowladaha dunida sida UK, Iyo US. Inkasatoo arrinkaas uu yahay kan saxda haddana weli waxay quus u noqoneysaa Farmajo iyo kuwa weli rajada ka qaba.
Maalinta berri ah oo loo ballansan yahay kulan Goalaha shacbiga oo dalkaan Khater geiyey kana mas’uul ahaa intii dhimatay 12 April ayaa waxaa la gudboon inaysan qaadin tallaabo kale oo dalka khater lagu gelinayo oo aysan ka yeelin Villa Somaliya in xil ka qaadis loo soo maro golaha Shacbiga agu sameeyo RW Rooble.
Haddii G/Shacbka uu ku kaco Falkaas Maxaa la gudboon RW Rooble?
Inuu qaado masuuliyadda dalka ka saaran ee ka dhalaneysa kursiga uu ku fadhiyo oo aan maanta cid kale ku fadhiyin.
Inuusan lumin fursadda ah inuu dalka ka badbaadiyo colaad ay dad ku dhintaan haddii kale Rabbi waa kula xisaabtamyaa dayacaadda Mas’uuliyadda iyo dhiigga muslimiinta oo la daadiyey bil Ramadaan si uu raalli geliyo ruux ka mid kuwii laga duceysan jiray ee la oran jiray Rabbiyow ha nagu salid mid aan kaa cabsan (Farmajo) oo aan noo naxariisaneyn kaas oo ah M. Farmajo.
In RW Rooble ilaaliyo mirihii ka dhasahay dadaalkii uu sameeyey ee ahaa inuu mideeyey mucaaridka iyo Maamul goboleedyada dalka si aysan u kala daadan mar kale.
Inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay, isla markaana uu ka tago cid kasta oo qabtaa feker aan taas ahayn waqtigaan.
Inuu M. Farmajo runta u sheegaa, kuna adkeystaa in lagu noqdo doorashadii 17 Septeber wixii lagu heshiiyey haddii kale waa inuu si cad uga soo horjeestaa M. Farmajo maadama aan hadda xilka si sharci ah looga qaadi Karin oo barlamanka iyo Madaxweynahaba ay ka dhammaatay sharciyaddii.
Inuu ka dhabeeyoi hadalkiisii ahaa inay ciidaanka ku noqdaan xeryahooda oo ay amarkiisa sugaan.
Waxaan rajeyneynaa in maalmahan murugada ah uu rabbi na waafajiyo jidka toosan, naga dul qaado Farmajo intii uusan hooyo kale dilin, mid kalana barakicin. Cid kasta oo ku kaalmeysay, kuna kaalmeyeysa weli waa lagu xisaabtami doonaa oo ay ku jiraan mas’uuliyiintii hore Ivo kawa hadda oo weli khiyaanada nagu wada, waayo Somalida waxba uma kala qarsana, munaafaqna rabbi ma qariyo waa la isaga daba iman cidkasta wixii ay Qaranka u dainty.